यो देशका सञ्चालक मानसिक बिरामी हुन् ?
काठमाडौं । राष्ट्रपतिले हेलिकोप्टर चढेर कोदो खेती अवलोकन गर्न गएको देखियो, सरकार आफै भ्रष्टाचार गर्ने, छानबिन समिति पनि आफै बनाउने नौटङ्की पनि यही देशमा भइरहेको छ । सांसदलाई दिएको सहायकको तलव आफै खाएछन्, साइकल चढ्नेले समेत पेट्रोलको खर्च लुड्याएछन्, घर हुनेले समेत घरभाडा हसुरेछन्, तैपनि सरकार प्रमुख भन्छन्– जुन विरोध भइरहेको छ, त्यो गणतन्त्र सखाप पार्ने साजिस हो रे ।
कम्युनिष्ट नेता, शिक्षा र स्वास्थ्यका बनिया बनेका छन् । मेडिकल शिक्षाका लागि माफियाको काम गरिरहेको आरोप तिनैमाथि छ । श्रीमान मन्त्री, श्रीमती घरभाडा र अन्य नैतिकहीन सुविधा लिइरहेका देखिन्छन् । ठेकेदारसँग बसेर मार्सी चामलको खान्की सत्तासीन नै खान्छन् । ठेकेदारको पक्षमा बोल्छन् । सिण्डिकेटवाला र अपराधीहरुको संरक्षक आफै बनेको समेत देखियो । राजदूतदेखि संवैधानिक अंगसम्मका नियुक्तीमा समेत पार्टीकरण भयो । अरु भन्दा पनि दुई थान वाइडबडी जहाज किनेको, सत्तापक्ष र विपक्षी नै पो कमिशन र भ्रष्टाचारमा मुछिए । एनसेलले तिर्नै पर्ने ३३ अर्व नतिर्दा पनि तिर भन्दैनन् । जेलका सांसदलाई संसद ल्याएर सपथ ख्वाउँछन् । गाउँसम्म पुगेको सिंहदरवार, घूस नख्वाई आमनागरिकको कुनै पनि काम हुनसक्दैन । तैपनि नेपाल सरकार भन्छ– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । शान्ति र सुशासन सरकारको लक्ष्य ।
यो देशका ठूला पार्टी, सञ्चालकहरु मनसिक रुपमा कमजोर नै हुन् त ?
लक्ष्य र उद्देश्य, यिनका चुनावी घोषणापत्र यतिसम्म लोकल्याणकारी छन् कि पढेर मन प्रसन्न हुन्छ । यिनैले चुनाव जिते, यिनको शासन गर्ने शैली हेर्दा लाग्छ, अर्को हिटलर, अर्को निरंकूश, अर्को अधिनायकवाद पो जन्मेछ । जनताको भोट लिएर हिटलर जन्मेकै हो । के नेपालमा पनि जनताको भोटबाटै जनताले आफैमाथि शासन गर्ने अधिनायकवादी शासक जन्माएछन् त ?
सत्य यही नै हो भने भन्नैपर्छ– हाम्रो देशका शासकहरु मानसिक रुपमा बिरामी नै हुन् । लोकतन्त्रको नाम जपेर र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका नामा भोट लिएर जुन तरिकाले शासन गरिरहेका छन्, त्यो अतिवाद हो ।
जनताले अतिवाद फालेका थिए, अर्को अतिवाद जन्मेको हो भने यो अतिवादको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो, यस्तो अतिवाद धेरै दिन चल्दैन ।